သက်တန့်ချို: ညီမလေးဖတ်ဖို့ (၃)
အခုရက်ပိုင်းအတွင်းမိုးကလည်းမစဲတော့ပဲ သည်းသည်းမဲမဲကို ရွာနေတော့တာပဲကွယ် ။ ဒီတစ်ညလုံး ထုံးစံ အတိုင်းပေါ့ မိုးကတဖွဲဖွဲလေး ရွာနေပြန်တယ်လေ ။ မိုးတွေရွာနေလို့ ကောင်းကင်ကြီးက မဲမှောင်မှိုင်း ညှို့နေ ပေမယ့် လမင်းကြီးကိုတော့ ရေးရေးလေး တွေ့နေရတယ်ကွဲ့ ။ေ၀၀ါးနေတဲ့ လမင်းကြီးကို ငေးကြည့်ရင်း ညီမလေး အတွက် စာတစ်စောင်ကိုရေးလိုက်ပါတယ် ။ ဒီတစ်ခါ ပထမဆုံးပြောချင်တာကတော့ မိန်းကလေး တွေသိသင့်တဲ့ ယောင်္ကျားအမျိုးအစားတွေပေါ့ကွယ် ။ လူအမျိုးမျိုးစိတ်အထွေထွေဆိုသလို ယောင်္ကျား အမျိုး အစားတွေလည်း အများကြီးရှိသကွဲ့ ။ အကြမ်းဖျင်းအားဖြင့် ၄ မျိုးရှိတယ်လို့ မှတ်ထားလိုက်ပါ ညီမလေး ။
၁ ။ ခြင်္သေ့ကဲ့သို့ ယောင်္ကျား
အရမ်းကိုပဲ တည်ကြည်ရဲဝံ့ပြီး မိမိအပေါ် နှစ်နှစ်ကာကာ ချစ်ခင်လေးစားလေ့ရှိတယ် ။ အန္တရာယ်တစုံတရာ အသက် ဘေးနဲ့ကြုံတွေ့တာတောင်မှ ဘယ်တော့မှ သစ္စာမဖောက်ပဲ မိမိကြင်သူအပေါ် အသက်စွန့်ပြီး ကာကွယ် ပေးလေ့ရှိတယ် ။ ယောင်္ကျားဝတ္တရားငါးပါးနဲ့ အညီနေထိုင်သလို မိမိရဲ့ပါရမီဖြည့်ဖက်အပေါ် လေးနက် တည်ကြည်တဲ့စိတ်ထားရှိသူပေါ့ကွယ် ။ ညီမလေးသာ အဲဒီလို ယောင်္ကျားမျိုးနဲ့ဆုံတွေ့ခဲ့ရရင် တစ်သက်လုံး လက်တွဲ မဖြုတ်ပဲ ခိုင်ခိုင်မြဲမြဲ လက်တွဲလိုက်ပါ ။ ညီမလေးအကျိုးကိုသာ လိုလားတဲ့ ယောင်္ကျားမြတ် အမျိုးအ စားဖြစ်ပါတယ် ။
၂ ။ မျောက်ကဲ့သို့ ယောင်္ကျား
ဒီလို ယောင်္ကျားမျိုးဟာ မျောက်လို့ ဆိုသကဲ့သို့ အငြိမ်မနေတတ်ပေဘူး ညီမလေးရေ ။ မျက်လုံးကလည်း အလွန်ကစားပြီး တစ်ကိုင်းပြီးတစ်ကိုင်းသာရာကို ကူးလေ့ရှိတယ် ။ မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကို အတည်တကျ တွဲလိုတဲ့ စိတ်ထားမရှိပဲ ချောတဲ့နောက် ကောက်ကောက်ပါအောင်လိုက်လေ့ရှိတယ် ။ ကိုယ်က ဘယ်လောက်ပဲ သစ္စာရှိရှိ သူကတော့ အမြဲတမ်း သစ္စာဖောက်နေမှာပါပဲ ။ ဒီလို ယောင်္ကျားမျိုးနဲ့ဆုံဆည်းရရင်တော့ ဝေးဝေးက ရှောင်ပေတော့ ညီမလေးရေ ။
၃ ။ မြေခွေးကဲ့သို့ယောင်္ကျား
အလွန်ကို ကောက်ကျစ်စဉ်းလဲပြီး ယောင်္ကျား စင်စစ်ဖြစ်ပါလျှက် သူတပါး အကျိုးကို အမြဲပျက်ဆီး ရာပျက်ဆီး ကြောင်းကြံစည်နေတတ်တဲ့ ယောင်္ကျားမျိုးပေါ့ကွယ် ။ တစ်ချိန်လုံး ကိုယ့်အနီးမှာ ရှိတဲ့ ကြင်သူ မိတ်တွေတွေကို ကုန်းချော ရန်တိုက်ပေးလိုစိတ်ရှိတဲ့ စိတ်ထား ယုတ်ညံ့တဲ့ ယောင်္ကျားမျိုးပေါ့ကွယ် ။ မြေခွေးဆိုသလိုပဲ တစ်ကောင် တည်းတော့ ရန်မထောင်ဝံ့ဘူး ။ အမျိုးတူစရိုက်တူတွေတွေ့ပြီ ဆိုရင်ဖြင့် ကမ်းကုန်အောင် ဆိုးတတ်တဲ့ ယောင်္ကျားမျိုးပေါ့ ။ ဒီလို ယောင်္ကျားမျိုး ကြုံရရင်တော့ ဒူးနဲ့မျက်ရည်သုတ်ဖို့မ လွဲပါဘူး ။ ဝေးဝေးက သာ ရှောင်ပေတော့ ညီမလေးရေ ။
၄ ။ ကြောင်ကဲ့သို့ ယောင်္ကျား
အမြင်မှာကြည့်ရင်တော့ ပွတ်သီးပွတ်သပ်နဲ့ ကိုယ့်ကို ချစ်ခင်ကြင်နာယုယ သလိုပဲပေါ့ကွယ် ။ ဒါပေမယ့် တကယ် တမ်းကျတော့ သူတို့ကို သခင်လို ပြုစုရပြီး အရမ်းကို ဂျီးများတတ်တဲ့ ယောင်္ကျားမျိုးပေါ့ ။ အရမ်းကို ကြောက်တတ် လေ့ရှိပြီး အန္တရာယ် တစုံတခုနဲ့ကြုံတဲ့အခါ မိန်းမနောက်ကွယ်ထဲက ၊ ပုဆိုးခြုံထဲက လက်သီးပုန်းပြတတ်တဲ့ ယောင်္ကျား မျိုးပေါ့ ။ စိတ်ဓါတ်က အားကိုးလောက်စရာမရှိတဲ့အတွက် ပယ်ချသင့်တဲ့အမျိုးအစားပေါ့ကွယ် ။
ဒီလောက်ဆို ညီမလေးလည်း လောကမှာ ဘယ်လိုယောင်္ကျားမျိုးကိုရွေးချယ်သင့်တယ်ဆိုတာနဲ့ သိသင့်တဲ့ ယောင်္ကျား အမျိုးအစာေးတွအကြောင်းကို သိလောက်ရောပေ့ါကွယ် ။ နောက်ပြောချင်တဲ့အကြောင်းကတော့ " အချစ် ၊ အိမ်ထောင်ပြုခြင်းနဲ့ ဘ၀ " ဆိုတာပါပဲ ။ ညီမလေးလည်း ဘ၀မှာ မလွဲမသေကြုံရမယ့်အရာမို့ အလေး အနက်စိတ်ဝင်စားလိမ့်မယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ် ။
အချစ်ဦးဆိုတာ လူတိုင်းကိုယ်စီ အရူးအမူး ဖြစ်ခဲ့ကြတဲ့အရာပေါ့ ။ လူတိုင်းလည်း အချစ်ဦးကိုယ်စီ ရှိခဲ့ကြဖူး လိမ့်မယ် ။ ဒါပေမယ့်ကွယ် အချစ်ဦးနဲ့ ပေါင်းစပ်ခွင့်ရတဲ့ လူကတော့ အရမ်းကို ရှားပါးပါလိမ့်မယ် ညီမလေးရေ ။ မိန်းကလေးဆိုတာ ပန်းကလေးတစ်ပွင့်နဲ့တူတယ် ညီမလေးရဲ့ ။ ပန်းကလေးတွေဟာ လှပနေတဲ့အချိန်မှာ လိုချင်ဆွတ်ခူးယူလိုသူတွေ များပြားနေလေ့ရှိပြီး ခြောက်သွေ့ညှိုးလျော်သွားတာနဲ့တပြိုင်နက် စွန့်ပယ်ခြင်းခံရပြီး စိတ်ဝင်စားမှုလည်း လျော့နည်းသွားတတ်လေ့ရှိတယ် ။ ဒါဟာ မပြောင်းလဲတဲ့ နိယာမ တရားတစ်ခုပေါ့ကွယ် ။ ဒီတော့ အဲဒီပန်းကလေး အစွမ်းကုန်ပွင့်ဖူးလှပနေတဲ့အချိန်မှာ မလွဲမသေ လက်ခံကြုံတွေ့ရမှာကတော့ အိမ် ထောင်ပြုခြင်းဆိုတဲ့အရာပေါ့ ။ အဲဒီမှာတင် အယူအဆ ၂ ခုပေါ်လာတယ်ညီမလေးရေ ။ အရမ်းကို စိတ်ဝင် စားဖို့ကောင်းပါတယ် ။
ပထမတစ်ခုကတော့ အချစ်နဲ့ဘ၀ဟာအတူတူပဲတဲ့ ။ အချစ်ဆိုတာ ဘ၀ဖြစ်ပြီး ကိုယ်ချစ်တဲ့သူနဲ့ အိမ် ထောင်ပြုခြင်းဟာ အကောင်းဆုံးပဲတဲ့ ။ အချစ်နဲ့ဘ၀ဟာ တစ်သားတည်းပေါ့ကွယ် ။ အဲဒီအယူအ ဆ ပိုင်ရှင် တွေဟာကိုယ်ချစ်တဲ့သူနဲ့သာ ပေါင်းစည်းပြီး ဆင်းရဲတွင်းထဲ ခုန်ဆင်းရပါလေ့စေ ၊ ထမင်းရည်ပဲ အတူလျှက် ရပါလေ့စေ မောင်နဲ့မယ် မခွဲတမ်း အတူဆိုတဲ့ လူစားမျိုးတွေပေါ့ကွယ် ။ အဆင်ပြေကျရင်တော့ အကောင်း ဆုံးပေါ့ ။ အိမ်ထောင်ပြုပြီးခါမှ လင်နဲ့မယား လျှာနဲ့သွားဆိုသလို အခန့်မသင့်လို့ အဖုအထစ်လေးတွေဖြစ်လာရင် နင့်ကြောင့် ငါ့ကြောင့်ဆိုပြီးစိတ်မကောင်းစရာတွေ ကြုံရလေ့ရှိတယ်ညီမလေး ။
ဒုတိယတစ်ခုကတော့ အချစ်ကို အချစ်လို့ပဲမြင်ပြီး ဘ၀ကို ဘ၀လို့ပဲ မြင်တဲ့ အမျိုးအစားပေါ့ကွယ် ။ အချစ်ဆိုတာ သီးသန့် နှလုံးသားထဲမှာပဲရှိပြီး ကြင်သူနဲ့ ပေါင်းရသည်ဖြစ်စေ ၊ မပေါင်းရသည်ဖြစ်စေ အချိန်တန်ရင်တော့ ဘ၀ အတွက် အိမ်ထောင်ပြုလေ့ရှိတယ် ။ ဘ၀ကို အကောင်းဆုံးတည်ဆောက်ပြီး အချစ်ကိုတော့ တစ်သက်လုံး နှလုံးသားထဲ သိမ်းထားတတ်တဲ့ လူစားမျိုးပေါ့ ။ သူတို့ခံယူချက်က ဘ၀အတွက် အိမ်ထောင်ပြုပြီး အချစ်ကိုတော့ နှလုံးသားထဲက သီးသန့်နယ်မြေလို့ ခံယူထားသူတွေပေါ့ ။
အဲဒီ ၂ ခုလုံးကိုကြည့်မယ်ဆိုရင် ပထမတစ်မျိုးက နှလုံးသားကိုဦးစားပေးပြီး ဒုတိယတစ်မျိုးကတော့ဦးနှောက်ကို ဦးစားပေး တာ တွေ့ရပါတယ် ။ အချစ် ၊ အိမ်ထောင်ပြုခြင်းနဲ့ ဘ၀ဟာ တစ်ထပ်တည်းကျခဲ့ရင်တော့ ဘာများ ပြောစရာလိုပါသေးသလဲ ။ အကောင်းဆုံးပေါ့ ။ ဒါပေမယ့် လောကကြီးမှာ အကောင်းကြီးပဲဆိုတာ ဘယ်တော့ မှရှိမနေဘူး ဆိုတဲ့ မူအတိုင်း တကယ်ကြုံတွေ့ရတဲ့အခါ အဲဒီ အယူအဆ ၂ ခုထဲက တစ်ခုကို ရွေးရလေ့ရှိပါတယ် ။ ကဲ... ဘာကို ရွေးချယ်ရလဲ ???? ပထမအယူအဆက နှလုံးသားကို ဦးစားပေးတဲ့အတွက် အမှားများနိုင်သလို တကယ်အမှားကြုံတွေ့ခဲ့ရင်လည်း ငါအချစ်အတွက် မှားတာပဲလေ ခံနိုင်ပါတယ်ဆိုပြီး ဖြေသိမ့်တတ်ကြပါတယ် ။
နှလုံးသားကို ဦးစားပေးပြီး ဘ၀ကို တည်ဆောက်ရင် တကယ်ပဲ တစ်သက်လုံး စိတ်ချမ်းသာ မှာတဲ့ လား ။
ဒုတိယအယူအဆကတော့ ဦးနှောက်ကို ဦးစားပေးပြီး ဘ၀ကို တည်ဆောက်တဲ့အတွက် အမှားနည်းနိုင်ပေမယ့် တကယ်ကိုယ်ချစ်တဲ့သူနဲ့ မဆုံဆည်းရတဲ့အတွက် လူဟာ စက်ရုပ်ဆန်သွားတတ်ပါတယ် ။ ဘ၀မှာတော့ ဦးနှောက်ကို အသုံးပြုတဲ့အတွက် အောင်မြင်မှုကို သိမ်းပိုက်ကောင်းသိမ်းပိုက်နိုင်တယ် ။ ဒါပေမယ့် အချစ်ဆို တဲ့အရာဟာ အိပ်မက်တစ်ခုလိုပဲ မှေးမှိန်ပျောက်ကွယ်သွားလေ့ရှိပြီး နှလုံးသားထဲမှာပဲ ထွန်းလင်းနိုင်တဲ့ မီးလုံး လေးတစ်လုံးပေါ့ ။
ဦးနှောက်ကို ဦးစားပေးပြီး ဖြစ်သင့်တာတွေ လုပ်သင့်တာတွေဝိုင်းရံလို့ ဘ၀ကို လှလှပပ တည်ဆောက်ခြင်းဟာ တကယ်ပဲ တစ်သက်လုံး စိတ်ချမ်းသာမှာတဲ့လား ။
ဘာကို ရွေးချယ်ပြီး ဘာကိုဆုံးဖြတ်သင့်သလဲ ၊ ဘယ်လိုလုပ်ရမလည်းဆိုတာ ညီမလေးလည်း ပညာတွေတတ် သင့်သလောက်တတ်ပြီမို့ ကိုယ့်ဘာသာတွေးတော ဆုံးဖြတ်နိုင်ပါစေကွယ် ။ တစ်ခုမှာချင်တာကတော့ ကိုယ်ဆုံးဖြတ်လိုက်တဲ့ ကိစ္စတစ်ခုဟာ နောင်တစ်ချိန်မှာ နောင်တရမယ့် အရာမျိုးတော့ မဖြစ်ပါစေနဲ့ ။
စာလည်းအတော်ရှည်သွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက် ညီမလေးလည်း ငြီးငွေ့လောက်ရောပေါ့ ။ ဘ၀မှာ အေးမြဖြူစင်ပြီး မြင် တိုင်းတင့်တယ်တဲ့ ပန်းကလေးတစ်ပွင့် ဖြစ်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးရင်း စာကို အဆုံးသတ်လိုက်ပါတယ်ကွယ် ။
ညစဉ်ညတိုင်း ..ညီမလေး အိပ်မက်လှလှမက်ပါစေ..............။
Posted by သက်တန့်ချို at 1:37 PM
အဖြူရောင်နတ်သမီး August 18, 2010 at 6:58 PM
ပြီးတော့ ဘယ်လိုလူမျိုးကို ရွေးမလဲလို့ စဉ်းစားရင်း..
အမျိုးသမီးတွေအနေနဲ့သင့်တော်သောအမျိုးသားကို ရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်နိုင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးပါတယ်
မသီရိ August 19, 2010 at 12:22 PM
အနမ်း August 19, 2010 at 10:04 PM
ဟုတ်ကဲ့အကို မှတ်သားသွားပါတယ်း))
leo August 21, 2010 at 2:21 PM
ခြင်္သေ့လို လူစား များများ ရှိပါစေ..။
ယုန်ကလေး October 27, 2010 at 3:22 PM
အလွန်ကောင်းတဲ့ ဗဟုသုတစာလေးတွေ တင်ပေးတဲ့ အတွက် အရမ်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ခြင်္သေ့အမျိုးစားဖြစ်ရရင် ကောင်းမှာပဲ .. ညီမလေးလဲ နားလည်ပေးနော် .. ညီမလေးကို ခြင်္သေ့လိုယောင်္ကျားအနေနဲ့ ချစ်ပါ့မရ် ... ချစ်သူတွေ အများကြီးထားရင် စိတ်တော့မဆိုးနဲ့ပေါ့ ... Discovery မှာ ခြင်္သေ့တွေအကြောင်းပြရင် မိန်းမတွေ အများကြီးပါတရ်လေ သူ့ဘေးမှာ .. ဟီး (နောက်တာနော် ကိုသက်တန့် :p)
မမဟန်နီ April 24, 2011 at 4:16 PM
သိပ်ကိုမှန်ပါတယ် သူကြီး ......မိန်းကလေးတိုင်းသိထားရမဲ့အချက်တွေပါ....
Nyimin Latt February 11, 2013 at 12:55 PM